DAAWO:Wasiirka Dekadda Puntland oo difaacay heshiiskii DP World & Qorshaha dhismaha dekadda Boosaso oo uu ka hadlay
July 29, 2020 Mahad Jama 1
GAROWE(P-TIMES)- Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Maxamed Cabdi Cismaan (Majiino) oo maanta hadal ka jeediyey kulankii Baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in xubno ka tirsan dowladda lagu casuumay dalka Imaaraadka Carabta.
Wasiir Majiino ayaa xusay in dhinacyada tagi doona Imaaraadka ay kala garnaqsan doonaan madaxda dalkaasi dhismaha dekadda Boosaaso oo weli ay gacanta ku hayso shirkadda DP World maadaama heshiis uu dhex yaal Puntland iyo DP World.
Balanqaadyo kala duwan ayuu sheegay wasiirku in ay haystaan ka Puntland ahaan isla markaasna heshiiskii la galay uu dhigayey in shirkadda P&O Ports ay balaadhan ku samayso dekadda Boosaaso, kaas oo haatan qaatay muddo 4 sano ah balse qorshuhu ahaa in 2 sano ay ku dhisto dekadda.
Mr. Majiino ayaa xusay in caqabado badan oo is biirsaday ay sababeen dibu dhac ku yimaada dhismaha dekadda Boosaaso, waxaana sheegay in markii uu yimid xafiiska ay dabagal ku sameeyeen arimahaasi si looga dhabeeyo heshiiskii DP World iyo Puntland ee dekadda Boosaaso.
“Markii u dambaysay waxaan yeelanay balan bisha March inay tahay kama dabaysta inay tahay waxa dhacay hada de asmada aduunka ka dhacay baa dhacday oo aynu la wada socono oo Coronaviruskaas March ilaa hada isu socodkii ma suura galin” Sidaas waxaa yidhi Wasiir Majiino.
Dowladd ahaan ayuu sheegay in ay haystaan casuumad ay ka heleen dhanka Imaaraadka si loo dhameeyo arimaha haatan taagan, taas oo uu ula jeedo wasiirku dekadda Boosaaso iyo dhismaheeda oo u xanibay Imaaraadka Carabta.
Marka laga yimaado hadalka Wasiirka ayaa shacabka iyo siyaasiyiintu waxa ay dowladda ku dhaliilayaan dhismaha dekadda Boosaaso oo goor horeba qorshuhu ahaa in la bilaabo dhismaheeda, taas oo ay ku micneeyeen difaaca heshiiska DP World.
Khaainul wadan baa khaainul wadan kale baddalay. War isu ekaa ma isku wada awr baa?